गौरादहमा गठबन्धनको पक्षमा उर्लियो जनसागर , सामान्य सम्बोधन गरेर फर्किए ओली - Baikalpikkhabar
गौरादहमा गठबन्धनको पक्षमा उर्लियो जनसागर , सामान्य सम्बोधन गरेर फर्किए ओली
गौरादहमा कांग्रेस माओवादी र जसपाको गठबन्धनले बृहत चुनावी सभा गरिरहदा , नजिकै जनता माध्यमिक विद्यालयको छेउमा भैरहेको एमालेको सभा भने फिक्का रहेको थियो! पार्टी अध्यक्ष केपि ओलिले सम्बोधन गरिरहदा , सामान्य उपस्तिथि रहेको थियो , ६,७,८ र ९ बाट खासै उपस्तिथि नभएपछि सामान्य उपस्तिथिमा नै सम्बोधन गरेर ओलि फर्किएका थिए ।
झापाको गौरादह नगरपालिकामा सयुक्त गठबन्धनले पालिका स्तरीय आमसभा भब्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ ।गौरादह बजारमा आयोजित उक्त सभालाई , नेपाली कांग्रेसका कांग्रेसका केन्द्रिय महामन्त्री बिश्व प्रकास शर्मा र माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले सम्बोधन गरेका थिए।
सो शभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले कुनै प्रकारको दुबिधा नराखी गठबन्धनका साझा उम्मेद्बारहरु लाइ बिजयी गराउन आग्रह गरे ! शर्माले खासगरि, नेपाली कांग्रेसका नेता/ कार्यकर्ताहरु लाई माओवादीको चुनाब चिन्हमा कुनै दुबिधा नराखी भोट गर्न आग्रह गरे ! उनले भने , हाम्रा साथीहरूले कुनै दुबिधा राख्नु हुदैन , गठबन्धन राष्ट्रिय आवस्यकता हो, हामीले प्रतिगामी कदम लाई परास्त गर्दै लोकतान्त्रको रक्षा र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान राष्ट्रिय आवस्यकता अनुसार नै गठबन्धन गरेका हौं , देशै भरी गठबन्धनका साझा उम्मेद्बारहरुल जित्न आवस्यक छ , यहाँ पनि गठबन्धनका उमेदवारले जित्न जरुरी छ , त्यसकारण कुनै प्रकारको दुबिधा नराखी , गठबन्धनका उम्मेद्बारलाई भोट गर्न अनुरोध गर्दछु ।
शर्माले भने , कतिपय कांग्रेसका साथीहरुलाई माओवादी लाई कसरी भोट गर्ने ? हसिया हतौडामा कसरी भोट हाल्ने ?? जस्ता प्रश्न मन आएका होलान , त्यस्तो आउछ पनि , तर आजदेखि त्यस्तो कुनै पनि संकोच मनमा नराख्न सम्पुर्ण गौरादहका कांग्रेसका साथीहरूमा अनुरोध गर्दछु ! शर्माले हिजो आयोजित सभालाई सम्बोधनका क्रममा कांग्रेस र माओवादीका नेता कार्यकर्ता तथा गौरादहबासीलाई गठबन्धनमा भोट गरि , अत्यधिक मतले बिजयी गराउन अनुरोध गरेका छन ! साथै शर्माले गठबन्धनका उम्मेद्बारलाई जितको सुभकामना ब्यक्त गर्दै , विजयी उत्सबमा सहभागी हुने इच्छुक रहेको बताए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले नेपाली कांग्रेसका मेयरका प्रत्यासी रोहित कुमार साहलाई निर्वाचित गराउन माओवादी केन्द्रका नेता/ कार्यकर्ता लाई अनुरोध गरेका छन ! हिजो गौरादहको बृहत चुनावी शभालाई बिशेष अतिथिको हैसियतले सम्बोधन गरेका कार्कीले गठबन्धन राष्ट्रिय आवस्यकता भएकोले कुनै दुबिधा र भ्रममा नपरी रुख चिन्हमा मतदान गरि मेयरका उम्मेद्बार रोहित साहलाई जिताउन आग्रह गरेका छन । कार्कीले माओवादीले आफ्नो इमान्दारीता देखाउने बेला आएको भन्दै , गठबन्धनका साझा उम्मेद्बारहरु लाइ जिताउन आग्रह गरे ! कार्कीले रोहित साह र पुस्प ढकाल सहितको टिमले मात्रै गौरादहको मुहार फेर्न सक्ने भन्दै कार्कीले गठबन्धनका साझा उम्मेद्बारहरुको बिजयी निश्चित भएको बताए ।
हिजो भएको गौरादहको आमसभामा जनसागर उर्लिएको छ ।गौरादहका विभिन्न वडाबाट आएका सहभागीहरुले गौरादह बजार भरिभराउ थियो ! नजिकै जनता माबीको छेउमा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभाभने फितलो देखिएको थियो ! गौरादह बजारमा उल्लेख्य जनसहभागी भैरहदा एमालेको सभामा भने सामान्य मात्रै उपस्तिथि रहेको थियो । गौरादहको वडा न ६,७,८ र ९ बाट एमालेको चुनावी सभामा उपस्तिथि कम भएपछि सभापनि सामान्य रूपमा नै सकिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली , सभालाई सामान्य सम्बोधन गरेर फर्किएका थिए ।
बुधबार, २८ बैशाख, २०७९, बिहानको ११:२९ बजे